Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Na -arụ ọrụ dị ka ohu ruo afọ 20? Ị na -chụọ n'ọrụ!
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • omenala • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Envoy Air bụ ụgbọ elu mpaghara kacha ukwuu maka ụgbọ elu ndị America.
Ịrụ ọrụ ụgbọ elu dị otu a afọ iri abụọ pụtara nraranye na ịrụsi ọrụ ike. Mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịdị gị ka ịbụ ohu nke ọrụ gị.
Mgbe ị na -arụrụ Envoy ọrụ, ị gaghị eme mkpesa. Ọzọkwa, ịnweghị ike ịkọwa Rush Hour, ihe nkiri Jackie Chan.
Ọ nwere ike ịchụ gị n'ọrụ.
N’akwụkwọ ozi, Envoy Ikuku Njikwa akara ụbọchị August 25, 2021, onye ọka iwu New York Lee Seham na -ewe Envoy Air, onye mmekọ na American ụgbọ elu, na ọrụ maka ịkwụsị ndị ọrụ atọ maka ịkọwa onwe ha dị ka "ndị ohu" ma na -ehota ahịrị site na ihe nkiri Jackie Chan. Rush Hour dị ka ụzọ isi kọwaa na ebughị n'obi maka mkpasu iwe ndị ọzọ.
Ndị ọrụ atọ - Losaolima Fonokalafi, Faye Tuala, na Asefash Asfaha - onye ọ bụla nwere ihe karịrị afọ iri abụọ (20). Ha bụ, ndị mbịarambịa sitere na Tonga, Samoa, na Eritrea (Afrịka), ndị Envoy were ha n'ọrụ dị ka Ọkachamara Njikwa Ndepụta Ngwaahịa.
Onye nnọchi anya ahụ chọtara ihe mere ọ ga-eji kwụsị Nwada Fonokalafi n'ihi na, n'ịzaghachi okwu onye na-arụzi ụgbọ elu kwuru na ọ na-arụsi ọrụ ike, o kwetara na ya na onye ọrụ ibe ya na-arụ ọrụ dị ka "ndị ohu."
N'izu sochirinụ, onye ọrụ ibe ọcha zutere Nwada Fonokalafi maka okwu ya wee kwuo na "ndụ ojii dị mkpa." Oriakụ Asfaha-onye Afrịka-Amerịka a mụrụ na Eritrea-gbachitere onye otu ya site n'ịkọwa na Nwada Fonokalafi bụ onye Tonga ma nwee ahụmịhe ndụ dị iche na onye na-ebo ya ebubo ọcha.
Nwada Asfaha jiri onye ọrụ ibe ya tụnyere onye uwe ojii China na-emeghị ihe ọjọọ na ihe nkiri kụrụ ihe n'amaghị ama nke kwuru okwu mkparị na ụlọ mmanya nke ndị Africa-America kwadoro naanị, ma rịọ Ms. Tuala maka enyemaka n'icheta ihe nkiri na ihe nkiri ahụ. Nwada Tuala nyere aha ihe nkiri ahụ na okwu dị mkpa iji nyere Nwada Asfaha aka n'ịkọwa enweghị aka Nwanyị Fonokalafi.
Onye nnọchianya kwụsịrị Nwada Fonokalafi na Nwada Tuala maka ebubo ebubo nrụtụ aka "ohu" na -adịghị mma yana n'ihi na ha "hotara ahịrị ihe nkiri" nke na -akpasu iwe. Onye nnọchianya kwụsịrị Nwada Asfaha maka ebubo e hotara otu ahịrị ihe nkiri ahụ.
Akwụkwọ ozi Maazị Seham nke Ọgọst 25, nyere onye nnọchi anya nke sitere na Kọmitii Mmekọrịta Ndị Ọrụ Mba, kwuru na onye ọrụ nwere ikike n'okpuru iwu ọrụ gọọmentị iji kwupụta mkpesa gbasara ọnọdụ ọrụ ya site na iji asụsụ dị otú a. Ọ rụkwara ụka:
Agbụrụ ọ bụla bụ ohu ma bụrụkwa ohu ndị ọzọ. Esemokwu mba ụwa mbụ nke mba anyị bụ nzaghachi nye ndị ohi mmiri Africa bụ ndị merela ihe karịrị otu nde ndị ọkwọ ụgbọ mmiri Europe na ndị ọcha America. N'asụsụ bekee, okwu a “na -arụ ọrụ dị ka ohu” ma ọ bụ “ohu na -akwụ ụgwọ” bụ okwu akparị nkịtị nke na -apụtaghị ihe ọ bụla karịa na onye ahụ na -agbasi mbọ ike maka ịkwụghachi obere ụgwọ.
Seham gara n'ihu na-ekwu na ịkwụsị ndị ọrụ ogologo ndụ maka ntụnyere maka ihe nkiri a ma ama nke karịrị nde $ 245 n'ụwa niile enweghị ike izi ezi, ọkachasị mgbe ebumnuche ntụnye aka ahụ abụghị imejọ mana ọ bụ ịkwalite nghọta. Ọzọkwa, naanị otu onye Afrịka-Amerịka nọ n'oge ahụ bụ Nwada Asfaha, onye onye ozi ya kwụsịrị.
N'August 30, Envoy zara Maazị Seham na ọ "na -arụ ọrụ n'ịchịkọta data maka okwu a."